Ihe 5 kacha mma ịkwụ ụgwọ maka gam akporo | Gam akporosis
Paco L Gutierrez | | Ngwa gam akporo, Noticias
E nwere ọtụtụ puku ngwa n'efu na Playlọ Ahịa Google maka gam akporo ma enwere ha maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla anyị na-achọ, mana ọ bụghị ha kacha mma. Nsogbu anyị na-ahụkarị na Storelọ Ahịa gam akporo bụ na anyị na-achọta ọtụtụ narị ngwa ndị na-arụ otu nzube na n'etiti ndị nweere onwe ha niile ike gwụrụ anyị ịchọta nnukwu mgbasa ozi ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ micro iji nweta ọdịnaya niile, nke a na - eme ka anyị kwụọ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ wepu mgbasa ozi ma ọ bụ iji nweta ihe niile anyị chọrọ.
Ihe kachasị mma bụ ịchọta ngwa kachasị mma maka mkpa anyị ma nwalee ya, ebe ọ bụ na ọtụtụ ngwa akwụ ụgwọ nwere ụdị ikpe. Ọ bụrụ na ngwa ahụ bara uru, ọ gaghị afụ ụfụ ịkwụ ụgwọ ihe ha rịọrọ anyị maka ya, ebe ọ bụ na anyị ga-eme ka ọ dị ọhụrụ, anyị ga-ezere mgbasa ozi na-akpasu iwe ma na anyị ga-enye granite anyị n'aka ndị mmepe ka ha wee na-arụ ọrụ na ngwa ahụ iji melite ya na mmelite ọ bụla. Soro anyị ka anyị chọpụta nke bụ ngwa nkwụ ụgwọ 10 kacha mma maka gam akporo.
2 Nova obubata Prime
5 Legere Ọgụ
Ezigbo nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ nke na-enye anyị ọtụtụ ngwaọrụ iji weghachi foto anyị site na iwepu ihe ọ bụla achọghị. Ngwa nke na-enye anyị ohere iwepu eriri igwe eletrik na foto dị na obodo maka ụgbọ ala ma ọ bụ ịnyịnya ígwè nke na-agagharị gburugburu gị n'oge ịse foto. N'ihe banyere foto eserese, anyị nwere ike iwepụ ntụpọ ọ bụla na akpụkpọ ahụ, pịmpụl ma ọ bụ ụfọdụ ihe arụ sitere na foto ahụ n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ n'anya nke mobile foto, a na ngwa bụ uru ọ bụla penny nke € 1,99 Ọ na-efu na PlayStore ebe ọ na-azọpụta anyị site na iji ndị editọ foto na kọmputa ma ọ bụ na-alụ ọgụ na ndị ọzọ mgbagwoju anya gam akporo editọ.
Developer: ADVA Nro
Nova obubata Prime
Ngwa ọzọ nke na - enweghị ike ịnwe ndepụta na ngwa kachasị mma bụ Nova Launcher Prime ma enwere ihe ole na ole dị mkpa karịa na ngwanrọ gam akporo dịka nhazi ya enweghị ngwụcha, yana Launcher a, anyị agaghị echegbu onwe anyị banyere ma oyi akwa anyị nwere ma ọ bụ na ọ bụghị. otu ọrụ mara mma karịa onye ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nwere, ma ọ bụ site na akara ngosi ma ọ bụ site na nha, yana Kpọghe site ugboro abụọ enweta ma ọ bụ mmegharị ihuenyo iji nweta nseta ihuenyo.
Site na ngwa a, anyị ga-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe na-enweghị njedebe nke njedebe anyị, na-eme ka mobile anyị nwee mmetụta pụrụ iche n'ụwa. Ozugbo ịmechara gị ahụ, ọ nweghị usoro nhazi ọ bụla ga-emeju gị. Ngwa ahụ na-enye ohere ịchekwa ọrụ anyị iji kwado ha na ọdụ ndị ọzọ ma si otú a ghara ịmalite site na 0 ma ọ bụrụ na anyị gbanwee mobile.
Ahịa: $ 4.99
Ngwa amụma ihu igwe na-enye ọrụ na-adịghị agwụ agwụ ma ọ bụ nhazi maka wijetị. O doro anya na ọ bụ ngwa ihu igwe kachasị ntakịrị na Storelọ Ahịa Play ma na-enye ọtụtụ wijetị maka ihuenyo ụlọ yana gbara ọchịchịrị, customizable ificationsma Ọkwa na hour obula amụma na ihe oriri dị ala.
Ngwa a dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ngwa ihu igwe ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ihu igwe dị anyị mkpa ma ike gwụrụ anyị ịchọ nke dabara na ihe anyị na-achọ, na-enweghị mgbagha na nke a bụ nke kachasị mma. Na mgbakwunye na ịbụ ezigbo ngwa mara mma, awade animated nzụlite ọ bụla ọnọdụ ihu igwe y enweghị mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ. Ngwa a na-akwụ .10,99 XNUMX nke nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ, mana ọ bụrụ na anyị masịrị ụdị ngwa a anyị agaghị akwa ụta ya ebe ọ nwere ọtụtụ ọdịnaya, na mgbakwunye na emelitere oge niile.
Ahịa: $ 12.99
N'ezie anyị bụ otu n'ime ndị na-emebu oku vidiyo ole na ole site na PC ma n'ihi ọnọdụ ndị dị ugbu a, anyị kwesịrị ime ha ma ọ bụ maka ọrụ ma ọ bụ isoro ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi kwurịta okwu. Ọtụtụ mgbe ese foto wuru n'ime kọmputa bụ nke a kama mediocre mma, karịsịa ma ọ bụrụ na kọmputa bụ ihe ochie. Agbanyeghị, n'ezie igwefoto nke ekwentị anyị nwere ezigbo mma ma ọ bụ dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ịnwee ọkara ma ọ bụ njedebe dị elu ugbu a. Ọ bụ ezie na ngwa ahụ abụghị ihe dị ọnụ ala, € 4,99 ziri ezi ma ọ bụrụ na anyị ewere na kamera kamera nke yiri nke ahụ ga-efu anyị ọtụtụ ego.
Na DroidCamX anyị nwere ike iji igwefoto nke ekwentị mkpanaaka anyị dị ka kamera kamera nke kọmputa anyị nwere ezigbo mma, na-eji ma ọ bụ WiFi n'ụlọ anyị ma ọ bụ site na iji eriri USB na-eji nbipu USB. Anyị ga-eburu n'uche na iji ngwa a, anyị ga-etinye usoro ihe omume na kọmputa anyị site na iji modulu sọftụwia abụọ. Ngwa maka PC anyị ka ebudatara ozugbo na gị ukara website. Ozugbo anyị nwere ma ngwa meghee ma ngwaọrụ ejikọrọ na otu rawụta, DroidcamX ga-ebunye ọdịyo na vidiyo anyị na-eji ekwentị na kọmputa anyị.
DroidCam - kamera kamera maka PC
Developer: Udoka Ugonna
Enweghị ezigbo ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze karịa akwụkwọ ọgụgụ dị mma n'oge ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla na anyị anaghị enwe mgbe niile ọchịchọ ma ọ bụ ọkụ zuru oke iji udo nke obi gụọ. Ngwa a na-enye anyị ọgụgụ akwụkwọ n’ụdị dị iche iche dịka PDF, TXT, DOC, Epub. A na-agụ ọgụgụ ahụ site na olu sịntetik nke dị elu, n'etiti nke anyị nwere olu na asụsụ 54 dị iche iche, n'etiti nke anyị na-ahụ Spanish, Catalan, English ma ọ bụ Italian.
Ngwa a dị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ na - adịghị ahụcha ụzọ nke na - achọghị ịkwụsị ịgụ akwụkwọ n'agbanyeghị nsogbu anya ha. Ngwa a bụ ihe kensinammuo ma na-enye menu dị mfe maka onye ọ bụla ịnyagharịa enweghị nsogbu maka ojiji. Legere Reader na-enye ohere itinye akwụkwọ site na ngwa ndị ọzọ dị ka Dropbox ma ọ bụ iCloud, ozugbo ebupụrụ ọbá akwụkwọ anyị nwere ike ịhọrọ akwụkwọ ahụ dabere na usoro ma ọ bụ ọnọdụ nke faịlụ ahụ. Ọ bụ ezie na ngwa ahụ nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ maka € 9,99, ọ dị anyị ka ọ dị ọnụ ala na-atụle ndị na-ege ntị lekwasịrị anya yana ogo ya.
Developer: Legere Teknụzụ LLC
Ahịa: $ 9.99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 kachasị ụgwọ maka gam akporo